ဖုတျဝငျလို့သတေယျဆိုပွီး အမအေိုတဈဦးရဲ့ အလောငျးကိုရငျခှဲရုံမှာ စဈဆေးကွညျ့လိုကျသောအခါ - Barnyar Barnyar
အရမျးကောငျးလို့ဖတျစခေငျြတယျ… မသိဘဲ ကြူးလှနျမိလိုကျသော ပဉ်စာနန်တရိယကံ…
တကယျဖုတျမဟုတျဘဲ မိဘအရငျးကို ဖုတျထုတျတယျဆိုပွီး ကိုယျတိုငျပဲ လုပျသညျဖွဈစေ သူတဈပါးကိုလုပျခှငျ့ ပေးသညျဖွဈစေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယျတိုငျ မသိလိုကျသော ပဉ်စာနန်တရိယကံကွီး ထိုကျပါတယျ။ ဖုတျဝငျတယျဆိုပွီး အသတျခံလိုကျရတဲ့ အဖှားတဈဦး ကိုယျတှလေ့လေ့ာဖူးပါတယျ။ (ဒသေနှငျ့အမညျမြား မပွောပါ။)
ဒီအနအေထားက သားသမီးတှေ ငွိုငွငျရုံတငျမက မွနျမွနျပငျ သစေခေငျြနပေါပွီ။ ကိုယျ့အညဈအကွေးကိုတောငျ ကိုယျတိုငျ မစှနျ့နိုငျတော့ဘူး။ ပွုစုတဲ့သူတှကေ ရှံတတျတော့ ပိုဒုက်ခရောကျတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့အဖိုးအဖှားတှကေ အသကျသာကွီးတာ ဝမျးမီးက ကောငျးတုနျး။ အိပျရာထဲ လဲနပေမေယျ့ အစားကို ကောငျးကောငျး စားနိုငျပါတယျ။
အဲဒီလို အစားဝငျနတောကိုဘဲ မသိနားမလညျ ဆရာဝငျလုပျတဲ့ ပါတျဝနျးကငျြက ဖုတျဝငျနပွေီတဲ့။ အသကျကကွီး ရောဂါက နာတာရှညျ ပွုစုရတာ ကွာလာတော့ သားသမီးတှေ စတေနာပကျြလာ ပွီလေ။ လူကွီး လူမမာဆိုပွီး ကြှေးတာကနညျးနညျး ဆိုတော့ ညသနျးကောငျအခြိနျ ရောကျတော့ ဆာလာပွနျရော။ ကြှေးတုနျးက မဝသေးဘူး ဆိုပွနျတော့ အစားမြားရငျ ခြေး(ခြီး)ထှကျမယျဆိုပွီး ပနျးကနျ သိမျးသှားတယျလေ။
သူတို့ကွှေးတာ စားနရေတဲ့ ဘဝဆိုတော့ ထပျပွီးမပွောရဲ တော့ ငွိမျနလေိုကျရတယျ။ ကိုယျကိုယျတိုငျ အဖိုးအဖှားနရော ရောကျရငျ အဲဒီဒုက်ခ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ သားသမီးတှေ အိပျကုနျပွီအထငျနဲ့ ဗိုကျကလညျးတအား ဆာလာတာကွောငျ့ သားသမီးတှကေိုလညျး မနှိုးရဲတော့ ဖငျတှနျးဖငျတှနျးနဲ့ မီးဖိုခြောငျဆီကို တရှရှေ့ေ့..
အဲဒီအခကျြကဘဲ ဖုတျဝငျနပွေီလို့ စှပျစှဲစရာ ဖွဈသှားတယျ။ ဇရာဒဏျ/ ရောဂါဒဏျ ဖိစီးနတေော့ ကွောငျအိမျကိုအားပွု ပွီး တဖွညျးဖွညျး ထလိုကျတယျ။ ဖေးမမယျ့သူ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အသိကွောငျ့သာ အားတငျးပွီး ရပျနိုငျတာ။ ဖေးမမယျ့သူ တဈယောကျလောကျ တှရေ့ရငျ ခကျြခငျြးလဲကသြှားမှာ အမှနျပါ။
အဲဒီအခြိနျ မသင်ျကာစိတျဝငျနတေဲ့ သားသမီးတဈယောကျက မီးဖိုခြောငျမှာ အသံကွားတာနဲ့ ထလာပွီး လာကွညျ့တဲ့အခြိနျ။ ကွောငျအိမျထဲတှတေဲ့ ငါးဟငျးကို ယူစားနတေဲ့ အမအေိုကို တှလေို့ကျတော့ .. အိပျရာပျေါက မထနိုငျတဲ့ လူမမာ ဘယျသူမှ မသိအောငျ သနျးကောငျအခြိနျမှာ သူ့ဟာသူ ထစားနတောဟာ ဧကန်တ ဖုတျဆိုတာ မြားလား?
အဲဒီအခြိနျမှာ. အမေ ဘာလုပျနတောလဲလို့ မေးရော ..သားသမီးကို ရုတျတရကျ တှလေို့ကျရတဲ့ အမအေိုဟာ ငါ့ကို ဖေးမပေးမယျ့ သားရောကျလာပွီ ဆိုပွီး အားကိုးတဲ့ အနနေဲ့ တငျးထားတဲ့ စိတျကို လြှော့ခြ လိုကျတာနဲ့ ခှကေနဲ လဲကသြှား တော့တယျ။
အဲဒီအခကျြက ဖုတျဝငျတာ သခြောပွီလို့ အဆုံးအဖွတျပေး လိုကျသလိုပဲ။ အဲဒီနကေ့စပွီး ဆရာပငျ့ပွီး ဖုတျထုတျတော့တာပဲ။ ဆရာက အမြိုးမြိုး ဆေးစှမျးရော လကျစှမျးရော ပွပမေယျ့ ဖုတျမှမဟုတျတာ ဘယျလိုလုပျ ဖုတျထှကျမလဲ။ နောကျဆုံးမှာ ဆရာက သူ့သိက်ခာကမြှာစိုလို့ လူနာရှငျကို ခံဝနျ လုပျခိုငျးပါတော့တယျ။
ဒီဖုတျက စကျအာဏာ အတျောကွီးပွီဖွဈလို့ တျောရုံနဲ့ လုပျလို့ရမှာမဟုတျဘူး။ နောကျဆုံးအဆငျ့ စကျဖွတျဆေး တိုကျမှရတော့မယျ .. အဲဒါလူနာရှငျ အာမခံပေးပါပေါ့။ သားသမီးတှကေ အသိဉာဏျဗဟု သုတကလညျး မရှိ လူနာအမအေိုကို စိတျပကျြတဲ့ အခံနဲ့ ဆရာကို တဖကျသတျ ယုံကွညျပွီး ခံဝနျ လုပျပေးလိုကျတယျ။
သူတို့သဘောတူပွီး ကုတာပါပေါ့။ ဆရာရဲ့နောကျဆုံး စကျဖွတျဆေးလညျး တိုကျပွီးရော လူနာအမအေိုခမြာ လူးလိမျ့နအေောငျ ခံစားလိုကျရတယျ။ ဒါကိုဘဲ လုနာမှာဝငျပူးကပျနတေဲ့ ဖုတျက ဆရာရဲ့စကျဖွတျ ဆေးတျောကွီးရဲ့ အစှမျးကို ဘယျဖုတျ အမြိုးအစားမှ မခံနိုငျပါဘူးဆိုပွီး ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားနတေယျ။
တစတစနဲ့ လူနာအမအေိုရုနျးကနျလူးလှနျ့ နရောက တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ငွိမျကသြှားပါတော့တယျ။ ရကျရှညျလမြား လူနာမှာ စှဲကပျပွီး ညာစားနတေဲ့ ဧရာမနောကျဆုံးအဆငျ့ ဖုတျထှကျသှားပါပွီ။
အဲဒီမှာ ကြေးရှာမှာ တာဝနျကနြတေဲ့ ကြောငျးဆရာလေးက ဒီဖွဈစဉျကို မကနြေပျတာနဲ့ မွို့ကသူ့သူငယျခငျြး ဆရာဝနျကို အကွောငျးကွားတော့ ဆရာဝနျက အလောငျးကို ရငျခှဲရုံမှာ စဈဆေးလိုကျတော့မှ အဖွပေျေါတော့တယျ။ လားလား အောကျလမျးဆရာရဲ့ စကျဖွတျဆေးက အစှမျးထကျမှာပေါ့ ကွှကျသတျဆေးတှေ ဖွဈနတောကိုး တိုတိုပွောရငျ အောကျလမျးဆရာကလညျး လူသတျမှုနဲ့ ထောငျကြ သှားတယျ။
တိုတိုပွောလို့ မရတာက ပဉ်စာနန်တရိယကံကို ကြူးလှနျ လိုကျတဲ့ သားသမီးတှေ သိလို့ပဲဖွဈဖွဈ မသိလို့ဘဲဖွဈဖွဈ ဒီကံအတှကျ ပေးဆပျရမယျ့ အပွဈကွှေးက မသေးဘူးဆိုတာ သားသမီးတိုငျး သိနိုငျကွပါစေ..
ဖုတ်ဝင်လို့သေတယ်ဆိုပြီး အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ
အရမ်းကောင်းလို့ဖတ်စေချင်တယ်… မသိဘဲ ကျူးလွန်မိလိုက်သော ပဉ္စာနန္တရိယကံ…
တကယ်ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်းကို ဖုတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးကိုလုပ်ခွင့် ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်သော ပဉ္စာနန္တရိယကံကြီး ထိုက်ပါတယ်။ ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖွားတစ်ဦး ကိုယ်တွေ့လေ့လာဖူးပါတယ်။ (ဒေသနှင့်အမည်များ မပြောပါ။)
ဒီအနေအထားက သားသမီးတွေ ငြိုငြင်ရုံတင်မက မြန်မြန်ပင် သေစေချင်နေပါပြီ။ ကိုယ့်အညစ်အကြေးကိုတောင် ကိုယ်တိုင် မစွန့်နိုင်တော့ဘူး။ ပြုစုတဲ့သူတွေက ရွံတတ်တော့ ပိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အဖိုးအဖွားတွေက အသက်သာကြီးတာ ဝမ်းမီးက ကောင်းတုန်း။ အိပ်ရာထဲ လဲနေပေမယ့် အစားကို ကောင်းကောင်း စားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလို အစားဝင်နေတာကိုဘဲ မသိနားမလည် ဆရာဝင်လုပ်တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်က ဖုတ်ဝင်နေပြီတဲ့။ အသက်ကကြီး ရောဂါက နာတာရှည် ပြုစုရတာ ကြာလာတော့ သားသမီးတွေ စေတနာပျက်လာ ပြီလေ။ လူကြီး လူမမာဆိုပြီး ကျွေးတာကနည်းနည်း ဆိုတော့ ညသန်းကောင်အချိန် ရောက်တော့ ဆာလာပြန်ရော။ ကျွေးတုန်းက မဝသေးဘူး ဆိုပြန်တော့ အစားများရင် ချေး(ချီး)ထွက်မယ်ဆိုပြီး ပန်းကန် သိမ်းသွားတယ်လေ။
သူတို့ကြွေးတာ စားနေရတဲ့ ဘဝဆိုတော့ ထပ်ပြီးမပြောရဲ တော့ ငြိမ်နေလိုက်ရတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဖိုးအဖွားနေရာ ရောက်ရင် အဲဒီဒုက္ခ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သားသမီးတွေ အိပ်ကုန်ပြီအထင်နဲ့ ဗိုက်ကလည်းတအား ဆာလာတာကြောင့် သားသမီးတွေကိုလည်း မနှိုးရဲတော့ ဖင်တွန်းဖင်တွန်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ဆီကို တရွေ့ရွေ့..
အဲဒီအချက်ကဘဲ ဖုတ်ဝင်နေပြီလို့ စွပ်စွဲစရာ ဖြစ်သွားတယ်။ ဇရာဒဏ်/ ရောဂါဒဏ် ဖိစီးနေတော့ ကြောင်အိမ်ကိုအားပြု ပြီး တဖြည်းဖြည်း ထလိုက်တယ်။ ဖေးမမယ့်သူ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အသိကြောင့်သာ အားတင်းပြီး ရပ်နိုင်တာ။ ဖေးမမယ့်သူ တစ်ယောက်လောက် တွေ့ရရင် ချက်ချင်းလဲကျသွားမှာ အမှန်ပါ။
အဲဒီအချိန် မသင်္ကာစိတ်ဝင်နေတဲ့ သားသမီးတစ်ယောက်က မီးဖိုချောင်မှာ အသံကြားတာနဲ့ ထလာပြီး လာကြည့်တဲ့အချိန်။ ကြောင်အိမ်ထဲတွေ့တဲ့ ငါးဟင်းကို ယူစားနေတဲ့ အမေအိုကို တွေ့လိုက်တော့ .. အိပ်ရာပေါ်က မထနိုင်တဲ့ လူမမာ ဘယ်သူမှ မသိအောင် သန်းကောင်အချိန်မှာ သူ့ဟာသူ ထစားနေတာဟာ ဧကန္တ ဖုတ်ဆိုတာ များလား?
အဲဒီအချိန်မှာ. အမေ ဘာလုပ်နေတာလဲလို့ မေးရော ..သားသမီးကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်ရတဲ့ အမေအိုဟာ ငါ့ကို ဖေးမပေးမယ့် သားရောက်လာပြီ ဆိုပြီး အားကိုးတဲ့ အနေနဲ့ တင်းထားတဲ့ စိတ်ကို လျှော့ချ လိုက်တာနဲ့ ခွေကနဲ လဲကျသွား တော့တယ်။
အဲဒီအချက်က ဖုတ်ဝင်တာ သေချာပြီလို့ အဆုံးအဖြတ်ပေး လိုက်သလိုပဲ။ အဲဒီနေ့ကစပြီး ဆရာပင့်ပြီး ဖုတ်ထုတ်တော့တာပဲ။ ဆရာက အမျိုးမျိုး ဆေးစွမ်းရော လက်စွမ်းရော ပြပေမယ့် ဖုတ်မှမဟုတ်တာ ဘယ်လိုလုပ် ဖုတ်ထွက်မလဲ။ နောက်ဆုံးမှာ ဆရာက သူ့သိက္ခာကျမှာစိုလို့ လူနာရှင်ကို ခံဝန် လုပ်ခိုင်းပါတော့တယ်။
ဒီဖုတ်က စက်အာဏာ အတော်ကြီးပြီဖြစ်လို့ တော်ရုံနဲ့ လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ဆုံးအဆင့် စက်ဖြတ်ဆေး တိုက်မှရတော့မယ် .. အဲဒါလူနာရှင် အာမခံပေးပါပေါ့။ သားသမီးတွေက အသိဉာဏ်ဗဟု သုတကလည်း မရှိ လူနာအမေအိုကို စိတ်ပျက်တဲ့ အခံနဲ့ ဆရာကို တဖက်သတ် ယုံကြည်ပြီး ခံဝန် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
သူတို့သဘောတူပြီး ကုတာပါပေါ့။ ဆရာရဲ့နောက်ဆုံး စက်ဖြတ်ဆေးလည်း တိုက်ပြီးရော လူနာအမေအိုခမျာ လူးလိမ့်နေအောင် ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဒါကိုဘဲ လုနာမှာဝင်ပူးကပ်နေတဲ့ ဖုတ်က ဆရာရဲ့စက်ဖြတ် ဆေးတော်ကြီးရဲ့ အစွမ်းကို ဘယ်ဖုတ် အမျိုးအစားမှ မခံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေတယ်။
တစတစနဲ့ လူနာအမေအိုရုန်းကန်လူးလွန့် နေရာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်။ ရက်ရှည်လများ လူနာမှာ စွဲကပ်ပြီး ညာစားနေတဲ့ ဧရာမနောက်ဆုံးအဆင့် ဖုတ်ထွက်သွားပါပြီ။
အဲဒီမှာ ကျေးရွာမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ကျောင်းဆရာလေးက ဒီဖြစ်စဉ်ကို မကျေနပ်တာနဲ့ မြို့ကသူ့သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားတော့ ဆရာဝန်က အလောင်းကို ရင်ခွဲရုံမှာ စစ်ဆေးလိုက်တော့မှ အဖြေပေါ်တော့တယ်။ လားလား အောက်လမ်းဆရာရဲ့ စက်ဖြတ်ဆေးက အစွမ်းထက်မှာပေါ့ ကြွက်သတ်ဆေးတွေ ဖြစ်နေတာကိုး တိုတိုပြောရင် အောက်လမ်းဆရာကလည်း လူသတ်မှုနဲ့ ထောင်ကျ သွားတယ်။
တိုတိုပြောလို့ မရတာက ပဉ္စာနန္တရိယကံကို ကျူးလွန် လိုက်တဲ့ သားသမီးတွေ သိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မသိလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကံအတွက် ပေးဆပ်ရမယ့် အပြစ်ကြွေးက မသေးဘူးဆိုတာ သားသမီးတိုင်း သိနိုင်ကြပါစေ..